တရုတ်နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဌာန - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာထုတ်လွှင့်သော အသံလွှင်ဌာန
တရုတ် နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန (CRI) သည် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ အစိုးရပိုင် နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဘေဂျင်းမြို့ ၌ ရုံးစိုက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန သည် ၁၉၄၁ခုနှစ်တွင် ပီကင်း အသံလွှင့်ဌာန အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘေဂျင်း အသံလွှင့်ဌာန အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စီအာအိုင် သည် နိုင်ငံရပ်ခြားသတင်းဌာန ၃၂ ခုနှင့် ဒေသတွင်းသတင်းဗျူရို ၆ ခုရှိပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ အကြောင်းအရာများ အပါအဝင် နေ့စဉ် နာရီပေါင်း ၂,၇၀၀ ကျော်ထုတ်လွှင့်နေသည်။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ၂၄ နာရီ) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ ရေဒီယိုလှိုင်တိုနှုန်း ၅၀ ကျော် အသုံးပြု၍ ဘာသာစကားပေါင် ၆၅ မျိုးကို ထုတ်လွှင့်နေသည်။ ထို့ပြင် အင်တာနက်နှင့်ဂြိုဟ်တုများစွာမှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နေသည်။ ၎င်း၏အစီအစဉ်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်တွင်း AM နှင့် FM ရေဒီယို များမှ ထပ်ဆင့် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သည်များ လည်း ရှိသည်။
၃ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၄၁ ခုနှစ်
တရုတ် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း
၁၈ ဧပြီ ၁၉၇၈ (၁၉၇၈-၀၄-၁၈)
တရုတ် အသံ (external)
၂ ပီကင်းနိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန (မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်)
၃ အခြားသော ဘာသာစကား အစီအစဉ်
ပီကင်း ရေဒီယို အဖြစ် ၁၉၂၀ နှင့် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ခေတ်အချိန်အခါ၌ အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်သာရေဒီယိုအသံဖမ်းစက်များရှိကြသည်။ မြို့အနည်းငယ်တွင်စီးပွားဖြစ်အသံလွှင့်ဌာန ရှိသည်။ ထိုချိန်ကာလ ရေဒီယိုအသုံးပြုမှုအများစုမှာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်သည်။
ပီကင်းနိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန (မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်)ပြင်ဆင်
ပီကင်' နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန (မြန်မာဘာသာ) အစီအစဉ် ကို ၁၉၅၀ပြည့်နှစ် ဧပြီလ (၁၀)ရက်နေ့ မှ၍ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ်များ ကို တစ်နေ့ကို(၃)ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင်(၁)နာရီဖြင့် ပီကင်းအသံလွှင့်ဌာန မှတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပြီး ယူနန်ပြည်နယ် တယ်ဟုန် အသံလွှင့် ဌာနမှလည်း တစ်နေ့ကို(၃)ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင်(၁)နာရီဖြင့် ထပ်ဆင့် အသံလွှင့် ပေးလျက်ရှိသည်။ မြန်မာဘာသာပိုင်း အစီအစဉ်များ ကို နေ့စဉ် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅နာရီခွဲ မှ ၆နာရီ အချိန်တွင် ၁၁၈၈ ၊ ၉၈၈၀ KHz မှ လည်းကောင်း ၊ ညနေ ၇နာရီ ခွဲမှ ၈နာရီခွဲ အချိန်တွင် ၉၈၈၀ ၊ ၇၄၀၀ KHz မှ လည်းကောင်း ၊ ညနေ ၈နာရီ ခွဲမှ ၉နာရီခွဲ အချိန်တွင် ၇၄၀၀ KHz မှ လည်းကောင်း အသီးသီး ထုတ်လွှင့်လျက် ရှိသည်။ 
အခြားသော ဘာသာစကား အစီအစဉ်ပြင်ဆင်
တရုတ်နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာန (စီအာအိုင်) သည် မြန်မာဘာသာ အပါအဝင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာစကားများဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေသည်။
အယ်လ်ဘေးနီးယန်း RadioeJashtmeeKinës
အာမေနီယန် ၁၂ ဧပြီလ ၂၀၁၁
ဘီလာရုဘာသာစကား ၂၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၉  http://belarusian.cri.cn
မြန်မာ ၁၀ ဧပြီလ ၁၉၅၀ http://myanmar.cri.cn
ခရိုအေရှား Kineski Radio Internacional
ကမ္ဘောဒီးယား ၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၈  http://cambodian.cri.cn
ဒတ်ချ် ၂၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၉
အင်္ဂလိပ် ၁၁ စက်တင်ဘာလ ၁၉၄၇ http://english.cri.cn
Esperanto ၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၆၄ http://esperanto.cri.cn
ဖိလစ်ပိုင် Radyo Internasyonal ng Tsina
ပြင်သစ် ၅ ဇွန်လ ၁၉၅၈  http://french.cri.cn
ဂျာမနီ ၁၅ ဧပြီလ ၁၉၆၀ Radio China International
ဂရိ ၂၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၉ http://greek.cri.cn
ဟီဘရူး ၂၃ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၉ http://hebrew.cri.cn
ဟိန္ဒူ ၁၅ မတ်လ ၁၉၅၉ http://hindi.cri.cn
အီတလီ Radio Cina Internazionale
ဂျပန် ၃ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၄၁
ကိုရီးယား ၂ ဇူလှိုင်လ ၁၉၅၀ http://korean.cri.cn/
လာအို ၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၆  http://laos.cri.cn
မလေးရှား Radio Antarabangsa China
မွန်ဂိုလီယား ၁ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၆၄ Хятадын олон улсын радио
နီပေါ ၂၅ ဇွန်လ ၁၉၇၅ http://nepal.cri.cn
ပိုလန် Chińskie Radio Międzynarodowe
ရိုမေးနီးယား ၃၀ ဩဂုတ်လ ၁၉၆၈ Radio China Internaţional
ရရှား ၂၄ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၅၄ Международное радио Китая
ဆင်ဟာလာ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၇၅ http://sinhalese.cri.cn
စပိန် ၃ စက်တင်ဘာလ ၁၉၅၆ http://espanol.cri.cn
ဆွာဟီလီ ၆ မတ်လ ၂၀၀၆ http://swahili.cri.cn
တမီးလ် ဩဂုတ်လ ၁၉၆၃ சீன வானொலி
ယူကရိန်း မေလ ၂၀၀၈ Міжнародне радіо Китаю
ဗီယက်နမ် Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
တိဘက်၊ ဥဂါးရ်နှင့်ကာဇက်စတန်တို့၏ အသံလွှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်တွင်းရေဒီယိုများ (တိဘက်ပြည်သူ့အသံလွှင့်ဌာနနှင့်ရှင်ကျန်းပြည်သူ့အသံလွှင့်ဌာန) တို့နှင့်အတူထုတ်လွှင့်နေသည်။
↑ စီအာအိုင် မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ်။
↑ CRI Online။ cri.cn။ 13 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-02-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CRI Launches Radio Station in Armenia။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ CRI Online Launches New Language Services။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cambodia Friendship Radio။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Skizo pri Esperanto-elsendo de ĈRI Archived4March 2016 at the Wayback Machine., CRI.
↑ Service français Archived 15 September 2015 at the Wayback Machine., CRI.
↑ 日本語部紹介 Archived4March 2016 at the Wayback Machine., CRI.
↑ Chinese, Lao Presidents Launch CRI's New Radio Service in Laos။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ नेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचय - China Radio International။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CRI Launches First Overseas FM Radio Station။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China Radio's Tamil station to launch FM channel in India။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Krishnan၊ Ananth (30 July 2012)။ At 49, China's Tamil radio station plans an expansion။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ပီကင်း နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဌာန (မြန်မာဘာသာ)
ပီကင်း နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဌာန (အင်္ဂလိပ်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဌာန&oldid=698978" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။